ဒေါက်တာ၏ Coronavirus ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှု Wolfgang Wodarg? : Martin Vrijland
Wolfgang Wodarg သည်ဂျာမန်ဆရာဝန်နှင့် SPD အတွက်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သည်။ ဥရောပကောင်စီ၏ကျန်းမာရေးကော်မတီ၏ပါလီမန်ညီလာခံ၏ဥက္ကဌအနေဖြင့် Wodarg သည်ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် ၂၀၀၉ တွင်အဆိုပြုထားသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၎င်းကို ၂၀၁၀ ဇန်နဝါရီလအရေးပေါ်အငြင်းအခုန်တွင်အတိုချုပ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ သူကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ H18N2009 တုပ်ကွေးလှုပ်ရှားမှုတွင်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများ၏တရားမ ၀ င်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
နောက်ထပ် coronavirus အသံ
ဒေါက်တာ နတ်သမီးပုံပြင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်းပြောဆိုခြင်းရှိကြောင်း Wodarg ကဖော်ပြသည်။ကရာဇ်မင်းမှာအဝတ်အစားမရှိဘူးကရာဇ်မင်းကအဝတ်အစားမဝတ်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောရဲခဲ့ကြဘူး။ မည်သူမျှဒီမြင်နေအသိအမှတ်ပြုဝံ့; ကောင်လေးတစ်ယောက်မှလွဲရင် လူတိုင်းရွယ်တူချင်းဖိအားကိုအရှုံးပေးပုံရသည်။
ဒီမက်ဆေ့ခ်ျကိုပင်မမီဒီယာများမှသတင်းအတုများအဖြစ်ပယ်ချခြင်းသို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုလုံးဝဆင်ဆာဖြတ်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ဖေ့စ်ဘွတ်ကဒီသတင်းစကားကိုဖြတ်သန်းသွားမှာလား။ ငါဆောင်းပါး၏အောက်ခြေတွင်ငါရှင်းပြအကြောင်းပြချက်အဘို့သင့်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
အနာဂတ်နည်းပညာရှင်ကွန်မြူနစ်အစိုးရလက်အောက်မှာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုမင်းကြားဖူးမှာပါ။ ထိုအခါသင်သည် politburo ၏ချမှတ်ထားအမှန်တရားကိုနားထောင်ရပေမည်။ ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာရှင်ကွန်မြူနစ်အစိုးရသည်လျင်မြန်စွာဖွင့်လှစ်နေပြီဟု coronavirus ၏ဟန်ဆောင်အောက်တွင်ငါအသေးစိတ်ရှင်းပြသည် ဤဆောင်းပါးတွင်.
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ coronavirus ကူးစက်ရောဂါဟာ PsyOp (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသခြင်း) ဖြစ်တာကြောင့်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဆက်စပ်မှုကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဆောင်းပါး ဖော်ပြပါ။ ဒါက coronavirus မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာလား။ အဘယ်သူမျှမ, ထို coronavirus ဖြစ်ကောင်းတည်ရှိပါဘူး။ သို့သော်၎င်းသည်သတိရှိစွာဖန်တီးထားသော bioweapon ဖြစ်နိုင်သည်ကိုဖယ်ထုတ်မထားပါ။ ၄ င်း၏ဘေးအန္တရာယ်ကိုအချိုးအစားမမျှတစွာဖောင်းပွနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်စာအုပ်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်ဖော်ပြသော 'master script' ၏အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ ယခုငါမှန်ကန်သောခန့်မှန်းချက်များစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုသင်တွေ့မြင်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွေးအခေါ်ကိုစွန့်ပစ်ပြီး 'master script' ကိုအမှန်တကယ်သိရန်အချိန်တန်ပြီ၊ သင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာနှင့်ယခုမှ စ၍ သင်ခံနိုင်ရည်ရှိသောအနေအထားကိုယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်စာအုပ်ထဲတွင်ဤသို့သောကူးစက်ရောဂါနောက်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်ဟုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ထိုစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးနောက်တွင်ဖတ်ပါ ဒီ link ကို စာအုပ်ဖို့ဖြည့်စွက်။
ဒေါက်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဝေဖန်သည့်အသံကိုထုတ်လွှင့်ရန် Wodarg ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ); အမှန်တရားကိုနီးကပ်စွာထိတွေ့မိသော်လည်းမှားယွင်းသောကိန်းဂဏန်းများကိုတမင်တကာပြသည့်အရေးပါသောအသံသည်နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းကိုသတင်းအတုများအဖြစ်ပယ်ချနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီး martinvrijland.nl ကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုပိတ်ထားရသည် (အကယ်၍သာ ထိုဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပါက) ။ ဒီဂိမ်းကိုဒီလိုရှုပ်ထွေးတဲ့နည်းနဲ့ကစားထားတယ်။
ဒီနည်းလမ်းကို“ ပျားရည်အိုး” နည်းဗျူဟာလို့ခေါ်တယ်။ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် 95% အမှန်တရားကိုမှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်ရောနှောခြင်းနှင့်၎င်းအားထိန်းချုပ်ထားသော (ကိုယ်တိုင်) လမ်းဖြင့် (ထိန်းချုပ်ထားသောအတိုက်အခံ) မှစတင်ခြင်းအားဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ထောင်ချောက်တစ်ခုချမှတ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒေါက်တာရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ ၁၀၀% သေချာပေါက်နဲ့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူး။ Wolfgang Wodarg သည်ကိန်းဂဏန်းအမှန်မှန်ကန်သည်။ ငါသာငါ့ကိုယ်ပိုင်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဤထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်စာအုပ်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်ထားဆန့်ကျင် '' ပျားရည်အိုး '' နည်းလမ်းများကိုလည်းသတိပြုပါရန်မှတ်သားစရာများ။ သင်အမှန်တရားအားလုံးနီးပါးကိုကြားရလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းကိုအနည်းငယ်အတုဖြင့်အဆိပ်သင့်စေမည်ဖြစ်ရာနောက်ဆုံးတွင်ကလေးကိုရေချိုးရေဖြင့်ပစ်ချရမည်။
Tags:: သို့, Anders, communisme, coronavirus, ဒေါက်တာ, အထူးပြုလုပ်ထားသော, အဘယ်သူမျှမ, အသံ, ရှိပါတယ်, ဖောင်းပွ။ က, keizer, အဝတ်အစား, အဝတ်အစား, နိုင်ငံရေး, psyop, နည်းပညာ, ရေနံချောင်း, Wolfgang ကို
21 မှမတ်လ 2020 10: 18
နိုင်ငံရေးသမားများ (သင်နယ်သာလန်ကိုကြည့်ပါက) အားလုံးသည်တူညီသော ဦး တည်ရာဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်ရခြင်းသည်အံ့သြစရာပင်။ ဘယ်ဘက်မှညာသို့သူတို့အားလုံးသည်ဖောင်းပွမှုတွင်ပါ ၀ င်ကြသည်။ ခြားနားချက်မှာချဉ်းကပ်မှုတွင်သာဖြစ်ပြီးညာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်ရှိပါတီများသည်စုစုပေါင်းသော့ပိတ်ခြင်းကိုလိုချင်သည်။ သို့သော်မူအရသူတို့အားလုံးသည်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ပြီးအားလုံးပါ ၀ င်ကြသည်။ မီဒီယာနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ Corona ဗိုင်းရပ်စ်သည်အလွန်ဆိုးရွားပြီးတိုင်းတာမှုအနည်းငယ်ချဲ့ကားခြင်းရှိမရှိသံသယမရှိပါ (ဥပမာ 1000x) ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ NL (လူအများထင်သည်ထက် ပို၍) တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်သံသယဖြစ်စရာများရှိပြီး Jensen ကိုထိုအရာအတွက်အသုံးချခဲ့သည်။ Jensen ဟာသံသယဝင်သူတွေကိုမယုံနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ နယ်သာလန်မှာရှိတဲ့“ honeypot” လုပ်ငန်းကိုသူမယုံတဲ့လူတွေအတွက်လုပ်နိုင်တယ်။
လူတွေဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်နေကြတာလဲ Jensen ကသူ့ရဲ့ podcast မှာအမှန်တရားအများကြီးပြောပေမယ့်ကမ္ဘာ့အထက်တန်းလွှာကဒီ coronavirus ကိုဘာကြောင့်ထုတ်လွှင့်ရတာလဲဆိုတာကိုသူပြတဲ့အခါမှာတော့ရေခဲရေကလာတာပါ၊ သူက Trump ကိုအနိုင်ယူရမယ်၊ ထို့အပြင်အာဏာရှင်စနစ်စတင်ကျင့်သုံးမှုနှင့်အတူ Corona ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ရေးကိုတစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းဆုံးရှုံးရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သူကသံသယ ၀ င်သူတွေကိုမယုံနိုင်အောင်လုပ်ပြီးတောထဲကိုလွှတ်လိုက်တယ်။
21 မှမတ်လ 2020 10: 51
Jensen သည်နောက်ဆုံးစာကြောင်းဖြစ်ပြီး Vrijland မှစာဖတ်သူများကိုဝေးဝေးရှောင်ရမည်။ သူကပဲသူရဲကောင်းအဖြစ် Trump ရောင်းစောင့်ရှောက်။ မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီ။ ဘယ်ဘက်မှညာဘက်ရှိနိုင်ငံရေးသမားအားလုံးသည်မျက်နှာတစ်ခုတည်းတွင်မတူညီသောမျက်နှာဖုံးများဖြစ်သည်။ ဂျင်ဆင်ကကျွန်မကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ ဘယ်သူမှမရဲရဲ၊ ငါနဲ့ငါ့စာအုပ်ကိုရည်ညွှန်းနိုင်တယ် ဒါကသူတို့အတွက်အကြီးမားဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုပဲ။
21 မှမတ်လ 2020 11: 02
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ လူအများအပြားကဒီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ "trapdoor ပင့်ကူ" ကိုကန်ကြတယ်။
21 မှမတ်လ 2020 13: 08
မှတ်ချက်ပေးသူများသည်ဤ site သို့လင့်ခ်တစ်ခုနှင့်အတူ jensen ၏ youtube podcast တစ်ခုတွင်ဤတွင်မှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်။ ထိုမှတ်ချက်များအားလုံးကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားကောင်းဖယ်ထုတ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအချို့သည်ဤနေရာတွင်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟုအမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
21 မှမတ်လ 2020 11: 39
21 မှမတ်လ 2020 12: 16
ထိန်းချုပ်ထားသောအတိုက်အခံနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခြင်းမှာဂျင်ဆင်သည်၎င်းတို့ထဲမှတစ် ဦး မဟုတ်ပါ
« coronavirus (lockdown) အစီအမံများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း။ လက်တွေ့ကျသောအကြံပြုချက်များ
လာမည့် coronavirus lockdown တွင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ »